युनिभर्सल पावरको बजार मूल्य १०० मुनि, किन हाईड्रोपावरलाई दोश्रो बजारको साथ भएन ? – Insurance Khabar
युनिभर्सल पावरको बजार मूल्य १०० मुनि, किन हाईड्रोपावरलाई दोश्रो बजारको साथ भएन ?
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आईतवार १६:३७
केही समय अघि आईपीओ निस्काशन गरेको युनिभर्सल हाईड्रोपावरको शेयर मूल्य अंकित मूल्य भन्दा पनि मुनि पुगेको छ । कारोवर सुरु भएको दिन बाटै निरन्तर घट्दै आज सम्म आँउदा बजार मूल्य १०० रुपैँया भन्दा मुनी आएको छ । आज कम्पनीको बजार मूल्य ९८ रुपैयाँ प्रति कित्ता बन्द भएको छ ।
आज कम्पनीको मार्केट डेप्थ हेर्दा बजारमा बिक्री कर्ताको संख्या राम्रै भएपनि खरीद कर्ताको संख्या निकै न्यून थियो ।
हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्काशन गर्दा स्थानीयले पूर्ण आवेदन नदिने र सर्वसाधारण जनतालाई शेयर बिक्री गर्न पनि कम्पनीलाई हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ । विज्ञापनमा राम्रै रकम खर्च गरेर आईपीओको सूचना निकाले पनि लगानीकर्ताले मरिहत्ते गरेर शेयर हाल्न छोडेका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको दोश्रो बजारमा हाईड्रो कम्पनीको शेयरको मूल्य नै हो ।